Zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu, kuhlanganiswe lezo ezazikwazi ukunyakaza nalezo ezazingakwazi ukunyakaza, njengezinyoni nezinhlanzi, njengemithi nezimbali, futhi kuhlanganiswe nemfuyo, izilokazana, kanye nezilwane zasendle ezenziwa ngosuku lwesithupha—zonke zazizinhle kuNkulunkulu, futhi, ngaphezu kwalokho, emehlweni kaNkulunkulu, zonke lezi zinto, ngokuhambisana nohlelo Lwakhe, zazifinyelele esicholweni sokupheleliswa, futhi zazifinyelele emazingeni uNkulunkulu ayefisa ukuwafeza. Isinyathelo ngesinyathelo, uMdali wenza umsebenze ayehlose ukuwenza ngokuhambisana nohlelo Lwakhe. Zilandelana, izinto ayehlose ukuzidala zavela, kanti ukuvela kwazo ngayinye, kwakukhombisa igunya lo Mdali, nokucaca kwegunya Lakhe, futhi ngenxa yalokucaciseka, zonke izilwane zazingenakwenza lutho ngaphandle kokubonga umusa woMdali, nokuhlinzeka koMdali. Njengoba izenzo ezimangalisayo zikaNkulunkulu zazibonakaliswa, lo mhlaba wakhukhumala, kancane kancane, ngazo zonke izinto uNkulunkulu ayezidalile, futhi waguquka ekubeni isiphithiphithi nobumnyama waba nokucaciseleka nokukhanya, wasuka ekubeni nokuthula okuthe cwaka, waba nokuphila okukhwishizayo nobungqabavu obungenamkhawulo. Phakathi kwazo zonke izinto zendalo, kusukela kwezinkulu kuya kwezincane, kusukela kwezincane kuya kwezincinyane, akukho okungadalwanga ngegunya namandla oMdali, futhi kwakunesidingo nokubaluleka okuyingqayizivele futhi okusemvelweni yaso, ukubakhona kwesilwane ngasinye. Akukhathaliseki umehluko ngokubunjwa nesakhiwo sazo, zazifanele ukuba zazenziwe uMdali ukuze zibekhona ngaphansi kwegunya lo Mdali....
Okwedlule：Ngosuku Lwesithupha, UMdali Uyakhuluma Futhi Uhlobo Ngalunye Lwezidalwa Eziphilayo Engqondweni Yakhe, Luyavela, Olunye Emva Kolunye
Okulandelayo：UNkulunkulu Uhlose Ukubhubhisa Izwe NgoZamcolo, Uyala UNowa Ukuba Akhe Umkhumbi